Dabalata – Beekan Guluma Erena
Dabalata	Beekan Erena
Uncategorized March 23, 2016March 23, 2016	0 Comment
1Dukkanaan DuubaDhaabaa wayyeessaa1992
Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman
Mata Duree Barreessaa
Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo- Afaan Amaaraa
Special Oromo- English Amharic Dictionary
Oromo Dictionary; 1995
Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo
Galmee Jechootaa Afaan Oromoo; 1999
Afaan Oromoo- Afaan Oromootiin
Galmee Jechootaa Afaan Amaaraafi Oromoo; 1989/94
Abarraa Nafaafi Kanneen biroo
Qabee jechootaa 1-4 (1986, 1988, 1993,19 99)
Jaamboo (1999, 2000, 2003, 2002, 2006
Mini, Pockt & Large
Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii- Oromoo- Amaaraa ;1994/ 2002
A’L Amaan Saaddoo
Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1992/2000
Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1995/2002
Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii- Amaaraa; 1995/2003
Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii; 2000
Diraamaafi Fiilmii Afaan Oromootiin Barreeffaman Muraasa Isaanii: Lak.
Faana dhoofticha Gadoo
Cancala Jaalalaa (Fiilmii)
Maqaa Hojii Uumee
Mulugeetaa Nagaasaa ,Diimaa Abarraa BATO
Mulugeetaa Nagaasaa, Diimaa Abarraa, Mootummaa Asaffaa
Mulugeetaa Nagaasaa,Diimaa Abarraa
Afaan Ingilizii irraa gara Afaan 19Oromootti kan jijjirame1998
Abdulnaasir Hajii Haseen
Nabiyyuu Takkaalliny, Mulugetaaa Nagasaa
1. Irreecha (gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
2. Irreecha; Hora Arsadii (Barruu) -yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
3. Bakkalcha Oromiyaa (gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
4. Seyfe Nebelbal (Gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
5. Bariisaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
6. Kallacha Oromiyaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
7. Urjii (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
8. Coqorsa (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
9. Gadaa (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hojiirra jiru.
10. Madda Walaabuu (Gaazexaafi Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
11. Ichima (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
12. Qabee (Barruu ) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
13. Biiftuu (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
14. Risaa (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
15. Safuu (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
16. Siifsiin (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
← Aadaaf Turizimii